24 "iMac ngotshintsho lweprosesa ye-M1 ukuya" Kuthunyelwe "| ndivela eMac
24 ″ iMac ngotshintsho lweprosesa ye-M1 ukuya "Kuthunyelwe"
Bonke abo basebenzisi ababeke iodolo yeeMacs ezintsha ezingama-24 intshi kunye neeprosesa ze-M1 zika-Apple bahlala bejonge ukubona ukuba imeko yokuhambisa iyatshintsha. Ewe kubonakala ngathi ngoku abanye baba basebenzisi babona utshintsho kwiiodolo zabo ibonisa uphawu "oluthunyelwe" ngokuhanjiswa ngoMeyi 21 kwiimeko ezininzi.
Ngokusengqiqweni le miyalelo iphakathi kweyokuqala eyenziwe nge-iMac ngokukhawuleza ukuba ibigcinwe kwaye ngokucacileyo ngamaqela angenalo uhlengahlengiso ngokwamacandelo, oko kukuthi, imalunga Kwiimeko ezininzi ze-iMac ezingenasethingi zesiko.
Ngokomgaqo kubonakala ngathi abokuqala ukufumana ezi iMac iya kuba ngabasebenzisi abavela eCanada, kwaye ikwiwebhu MacRumors zibhekisa ngqo kubafundi bayo ababini kwaye bahlala kwelo lizwe. Siyaqonda ukuba abasebenzisi abaninzi abavela kwezinye iindawo baya kuqala ukufumana utshintsho kwiiyure ezimbalwa ezizayo ukuba abakakwenzi oko.
Kuyinyani ukuba ukuthunyelwa kwale iMac njengakwi-Pro Pro eboniswe ngo-Epreli ophelileyo kunengxaki yokulibaziseka ekuthumeleni izinto, kwaye oku kungenxa yezinto ezininzi ezingaphaya kwe-Apple uqobo kodwa ezinefuthe ngqo kubasebenzisi bayo. Ukubeka oku ecaleni jonga iodolo ebekiweyo isuka "kuqhubekeko" iye "kulungiselelwa ukuhambisa ngenqanawa" emva koko uye "kuthunyelwa" Ngomhla ophawulwe ukufika kwabo, ngokungathandabuzekiyo luvuyo kubasebenzisi kwaye ngoku uninzi lwabo bakule meko.
Ngaba uthenge iMac engama-intshi ezingama-24? Ngaba imeko yoku-odola sele itshintshile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » iMac » 24 ″ iMac ngotshintsho lweprosesa ye-M1 ukuya "Kuthunyelwe"